GỤỌ NKE Albanian Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Ukrainian
Nye ndị na-eji okpukpe akpọrọ ihe, echiche nke inye Chineke otuto pụrụ ịbụ ihe na-eju anya. Ọ̀ bụ na Chineke abụghị Eze Kachasịnụ nke eluigwe na ala? Oleezi otú mmadụ nkịtị pụrụ isi nye ya otuto? Nke ahụ ga-ekwe omume, n’ihi na Bible na-agba anyị ume ka anyị ‘na-atụ egwu Chineke ma na-enye ya otuto.’ (Mkpughe 14:7) Otu ụzọ anyị pụrụ isi mee nke a bụ site ‘n’ịnụ okwu Chineke ma na-edebe ya.’ (Luk 11:28) N’ezie, site n’ịmụ Bible na ibi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’ụkpụrụ ya, anyị na-ewetara Onye Chepụtara ya, bụ́ Jehova Chineke, otuto na nsọpụrụ.
Ma olee ndị na-enye Chineke otuto taa n’ụzọ dị otú a? Ọtụtụ ijeri mmadụ na-azọrọ na ha na-eji okpukpe akpọrọ ihe, ma nke a ọ̀ gwụla ihe a chọrọ? Olee otú anyị pụrụ isi jide n’aka na ụzọ anyị na-esi efe ofufe na-amasị Chineke ma na-enye ya otuto? A ga-aza ajụjụ ndị a n’okwu na-akpali akpali bụ́ “Olee Ndị Na-enye Chineke Otuto Taa?” A ga-ekwu okwu ihu ọha a ná mgbakọ distrikti nke Ndịàmà Jehova nke ga-amalite n’October. A ga-enwe ọtụtụ narị mgbakọ dị otú ahụ gburugburu ụwa. Iji chọta ebe kasị dịrị gị nso, kpọtụrụ Ndịàmà Jehova n’ógbè unu, ma ọ bụ degara ndị na-ebipụta magazin a akwụkwọ. Magazin a na-ebipụtakọ ya na nke a, bụ́ Ụlọ Nche, mbipụta nke May 1, 2003, nwere ndepụta nke ebe ndị a ga-enwe mgbakọ na Nigeria.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Bịa, Nụrụ Okwu Ihu Ọha Bụ́ “Olee Ndị Na-enye Chineke Otuto Taa?”